बालदिवसको उपहार – Ketaketi Online
September 6, 2020 February 28, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on बालदिवसको उपहार
“यो केटो हजुरबुवा हजुरआमा भनेपछि हिरिक्कै गर्छ । सानो ४ वर्ष पुगेदेखि नै भो अब म तिमीलाई बोक्न सक्दिन । हजुरआमा घर नजाने भनेकी थिएँ ! तर त्यति सानो बच्चो यति लामो बाटो आउँछ र जाने गर्छ भन्दा छिमेकीहरु छक्क पर्थे । कहिलेकाहीं त म आफैँ पनि छक्क पर्थेँ । म विद्यालयमा पढाउन छिर्ने बेला बुवाले आएर लैजानुहुन्थ्यो । ऊ दिनभरि हजुरबुवा र हजुरआमासँग खेल्थ्यो । बेलुका फर्केर आएपछि जब ऊ सुत्थ्यो । अनि म उसका नरम खुट्टा हेरेर आफैँ टोलाउँथेँ । आँखा रसाउँथ्यो । अनि ती साना गोडामा तेल लगाइदिन्थेँ । तर समय नि कस्तो आयो ? हिँड छोरा म बोकेरै लान्छु भन्ने शक्ति पनि ममा छैन ! ऊलाई त के छ जाऊँ भन्यो भने बतोडले कुदेरै मामाघर पुग्न खोज्छ । अब त ७ वर्षको भइसक्यो । सानोदेखि दौडिएको बाटो भएर होला । अब यो २ घन्टाको हिँडाई पनि उसलाई केही लाग्नै छोडिसक्यो । तर, यस्तो बेला मलाई … ?” गुरुआमा एक्लै बडबडाइन् ।